महादेवको त्रिनेत्र ! के हो रहस्य ? कुनबेला खुल्छ तेश्रो आँखा ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
महादेवको त्रिनेत्र ! के हो रहस्य ? कुनबेला खुल्छ तेश्रो आँखा ?
शिव नै एक रहस्यमय !
प्रा. रुपक अधिकारी
सृष्टिको क्रममा तीन वटा देवता ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर (शिव) माथिल्लो तहका देवतालाई लिने गरिन्छ । यसमा व्रह्माले सृष्टि गर्ने, विष्णुले सृष्टिको अर्थात् पृथ्वीको पालन, पोषण वा संरक्षण गर्ने र महेश्वरले प्रलय वा अन्त्य गर्ने हुन्छ । संसारको प्रमुख शक्ति एउटै हो तर नाम र कामले विभाजन गरेर यी देवतालाई हेरिन्छ । यी तीनकोटी देवतालाई एउटै नामले चिनिन्छ, त्रिमूर्ति देवता भनेर । त्रिमूर्ति देवता अर्थात् खासमा शिवलाई नै त्रिमूर्ति देवता भनिन्छ ।
हाम्रो प्रकृतिको तीन वटा अवस्था हुन्छन् । एउटा सृष्टि, अर्को मध्यम अवस्था र अन्त्य । संसारमा जन्मिसकेपछि हरेक कुराको अन्त्य हुने शास्वत नियम हो । त्यो नियमलाई नियमित गराउने क्रममा प्रलय/विध्वंस/लय गर्ने कार्यक्षेत्र शिवजीको हो ।
शिवजीलाई त्रिनेत्रधारी देव भनिन्छ । शिवजीको तेस्रो नेत्र गुप्त नेत्र हो । जसलाई ज्ञान चक्षुः भन्छौँ । दुईवटा आँखा कर्म चक्षुः हुन्, जसले संसारको दृश्यलाई हेरेर मस्तिष्कसम्म लिएर जाने काम गर्छ । मस्तिष्कमा गएका दृश्यलाई कुन राम्रो, कुन नराम्रो सही गलत छुट्याउने तेस्रो आँखा हो । जसलाई ज्ञान चक्षुः भनिन्छ ।
हामी सामान्य मान्छेको ज्ञान चक्षुः देखाइएको छैन । शिवजीको भने देखाइएको छ । शिवको तेस्रो नेत्रको अर्थ आगो बुझिन्छ, जसले संसारको अन्त्य गर्ने वा प्रलय गर्ने समयमा शिवजीको तेस्रो नेत्र खुल्छ ।
शिवजीका नेत्रलाई प्रकृति निर्माणमा सत्व, रज, तम गरी तीन वटा गुणको रूपमा लिन सकिन्छ, जसमा सत्वको अर्थ कुनै फल अथवा मान–सम्मानको अपेक्षा अथवा स्वार्थ बिना समाजको सेवा गर्दछ । रजको अर्थ स्वयमको लाभ तथा कार्यसिद्धिको लागि बाँच्ने र तमको अर्थ अर्कालाई अथवा समाजलाई हानी पुर्याएर स्वयमको स्वार्थ सिद्धि गर्ने हुन्छ ।
शिवजीका त्रिनेत्रमा स्वर्ग, मर्त्य र पाताल गरी त्रिलोकको परिकल्पना गरिएको छ । त्यति मात्र नभई संसारमा जति पनि तीन वटा तत्वहरू छन्, ती सबै शिवको त्रिनेत्रको संकेत गरिएको बुझिन्छ । शिव रिसाएको अवस्थाको रूपलाई रुद्र भनिन्छ । रुद्र स्वरूप भन्नाले शिवको तेस्रो स्वरूप वा तेस्रो आँखा भनेर बुझिन्छ ।
शिवजीको शक्ति अन्य देवताभन्दा विपरित भएकाले शिव भन्नु नै एउटा रहस्य हो । हामीले अन्य देवीदेवताको मूर्ति वा तस्वीरमा पूजा गर्छौं तर शिवको मूर्तिमा पूजा नगरी शिवलिङ्गमा पूजा गर्नु एउटा रहस्यमय हो । त्यसैगरी शिवजीको नेत्रमा आगो र शिरमा गंगाजी हुनु वा आगो र पानी एकै ठाउँमा हुनु विपरित हो । शिवजीको शिरमा चन्द्रमा छ, जसकारणले शशिधर भनेर शिवलाई भनिन्छ । शिवजीको घाँटीमा विषले गर्दा नीलो छ । तै पनि घाँटी र हातमा नागकै माला वा हार लगाउनु रहस्यमय हो । बाघको छाला लगाउने, भष्म लेपन गर्ने, साँढेलाई बाहन बनाएर हिँड्ने, नन्दी, भृंगी लगायत हामी जुन कुराबाट डराउँछौ जस्तै भूतप्रेत त्यस्तालाई सँगै लिएर हिँड्ने र श्मशानमा रमाएर हिँड्ने भएकाले शिव नै एक रहस्यमय हुन् ।
शिवजीले बोकेका त्रिशूलको तीनवटा शूल छ । तीनवटा शूल शिवजीको अयुज अर्थात् हतियर हो, जसको अर्थ सृष्टि, स्थिति र लय हो । यी तीन तत्वलाई नियमन गर्ने संकेत हो ।
को–कसको त्रिनेत्र छ ?
शास्त्रअनुसार संसारमा भएका सबै जीवको त्रिनेत्र छन् तर देखिँदैन । दुइटा आँखा कर्म चक्षुः हुन्, जसले संसारको दृश्यलाई हेरेर मस्तिष्कसम्म लिएर जाने काम गर्छ । मस्तिष्कमा गएका दृश्यलाई कुन राम्रो, कुन नराम्रो सही गलत छुट्याउने तेस्रो आँखा हो, जसलाई ज्ञान चक्षुः भनिन्छ । त्रिनेत्र देखिएको देवता शिवजी हुन् । शास्त्रअनुसार शिवका जस्ता त्रिनेत्र अरु देवीदेवताको नभएको उल्लेख छ । तर महादेवकी अर्धाङ्गिनी/पत्नी पार्वती वा महाकालीमा तीन वटा आँखाको परिकल्पना गरिएको छ ।
प्रस्तुति : सरिता थारु